Weeraryahanka Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta, SADDEXDA Weerar Ee Uu Shaxdiisa Ka Dhigan Lahaa & Samuel Eto'o Oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay - Gool24.Net
Weeraryahanka Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta, SADDEXDA Weerar Ee Uu Shaxdiisa Ka Dhigan Lahaa & Samuel Eto’o Oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay
Halyeeyga xulka qaranka Cameroon iyo kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ee Samuel Eto’o ayaa ka hadlay qoddobo xasaasi ah oo ay kamid ahaayeen haddii uu isagu yahay xiddiga abid ugu fiican qaarada Africa iyo weeraryahanka ugu wanaagsan taariikhda kubadda cagta.
Eto’o oo kamid ah safiirada kubadda cagta ee koobka aduunka ee 2022 ayaa ka qayb qaatay barnaamij toos ah oo uu qabtay il-wareedka Generation Amazing.
Aan ku bilawnee Eto’o ayaa diiday aragtida ah inuu isagu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan taariikhda Africa waxaana uu sheegay inay adagtahay in la doorto maadaama oo ay jiraan ciyaaryahano badan oo waaweyn oo African ah.
“Way adagtahay in la sheego, waxa jiray kuwo badan oo ku guuleystay koobab caalami ah iyo abaalmarinta xiddiga sanadka ee qaarada Africa, anigu waxaan ahay mid kamida, sida iska cad waxaan koobab sarre kula guuleystay kooxo sarre” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Eto’o.
Dhinaca kale Samuel Eto’o oo xulanaya weeraryahanka ugu wanaagsan abid ayaa sheegay inuu yahay Ronaldo Nazario isla markaana ay isaga dabadii jiraan weeraryahano wanaagsan oo uu isagu ka Eto’o ahaan kamid yahay.
Markale Eto’o ayaa yidhi “Midka ugu wanaagsan dhammaan waa Ronaldo, Fenomeno, anigu ixtiraam iyo la dhicis sidaas ah ayaan isaga u hayaa, waxa jira kuwo badan oo imanaya isaga dabadii, anigu naftayda kuwaas ayaan ku darayaa”
“Ciyaaryahanka haatan ugu wanaagsan miyaa? waa inaan doorto Lionel Messi, kaas oo ah mid in badan khibrad leh, iyo Kylian Mbappe oo ah da’yarka samaynaya wacdaraha ugu weyn”
Ugu dambayn, Samuel oo xulanaya saddexleydiisa weerar ee riyada ayaa yidhi “Saddexleyda weerar ee ugu wanaagsan, way adagtahay in la doorto, laakiin waxaan dooran lahaa Messi, Ronaldinho iyo Ronaldo Fenomeno”